1. Yintoni i-Tribulus terrestris ekhuphe?
I-Tribulus terrestris sisityalo esincinci esinamagqabi. Ukukhutshwa kwe-Tribulus terrestris yenye yezona mayeza aziwa kakhulu kunye nezibonelelo ezahlukeneyo zempilo. Esi sityalo sikwabizwa ngokuba yiGokshura, caltrop, umdiliya ovuthayo kunye nentloko yebhokhwe. Isityalo sikhula kwiindawo ezininzi, kubandakanya indawo zaseAfrika, Middle East, Europe nase Asia. Zombini iziqhamo kunye neengcambu zesityalo zisetyenziswe njengamayeza kwiyeza laseIndiya i-Ayurveda kunye neMedical Chinese Medicine.
Abantu bebesebenzisa le herb ngokwesiko kwiimfuno ezahlukeneyo ezifana nokugcina umchamo usempilweni, ukuphucula i-libido, kunye nokudibanisa ukudumba. Ezi ntsuku, i-Tribulus terrestris ihlala isetyenziswa njengezongezelelo ngokubanzi, kunye nakwizongezelelo ezonyusa amanqanaba e testosterone.
2.Ukusetyenziswa kwe Tribulus terrestris kusetyenziswa
Kwiminyaka elikhulu edlulileyo, lo mthi uthathwe ngezizathu ezahlukeneyo. Ezinye zezona zidume kakhulu Ukusetyenziswa kwe Tribulus terrestris kusetyenziswa kubandakanya ukomeleza ukwakhiwa komzimba, ukomeleza ukusebenza kweembaleki, imiba yesini, imiba yentliziyo kunye nokujikeleza. Makhe sixoxe ngakumbi ngokusetyenziswa kwe-Tribulus terrestris kwiinkcukacha apha ngezantsi.
Ukunyusa amanqanaba eTestosterone
Yintoni eyenza i-Tribulus terrestris i-herb eyakhekileyo yokwakha izihlunu kukuba ikhupha iqulathe i-steroidal saponin protodioscin. Kuphando, oososayensi baseLithuania babonelela iimbaleki nge-625 mg yeepesenti ezingama-40 epesenti eyayine-Tribulus terrestris ekhupha kathathu ngemini kangangeentsuku ezingama-20. Baye baqonda ukuba i-testosterone ebijikeleza sele iphucule kakhulu kwiintsuku ezilishumi zokuqala zesifundo.
Iinzululwazi ezenze olu phononongo zaphetha ukuba i-Tribulus ikhupha imisebenzi ngokunyusa amanqanaba e-LH (i-luteinizing hormone) okanye i-FSH (i-follicle-activating hormone). Ihorm ezimbini ezi yi-gonadotropins kwaye ke oko kuvuselela ii-gonads kumfazi nakumadoda. Oku kukhuthaza ukudalwa kwe-estrogen kubafazi kunye ne-testosterone emadodeni. Enye into yindlela i-Tribulus ekhupha ngayo idlala neglucose, ukunciphisa inqanaba kunye nokukhuthaza ukuphendula komzimba okunyusa i-testosterone.
Olunye uphando lubonisa ukuba i-Tribulus ye-adatogenic. Ngamagama alula, isongezelelo siya kusebenza kuphela xa sinokunceda ukubuyisa inkqubo yomzimba kwi-equilibrium okanye i-homeostasis. Unoku engqondweni, kungafuneka ujikeleze umthamo we-herb yakho. Ngaphandle koko, unokuphelisa iziphumo ezifanayo nezifundo ezenziwe eLithuania, apho isongezelelo sisebenze ngokumangalisayo kwiintsuku ezili-10 zokuqala kodwa zange sisebenze kwiintsuku ezili-10 ezizayo.
Ichaphazela iswekile yegazi kunye nempilo yeentliziyo
Nangona uninzi lwabasebenzisi luqhele ukuthatha Ukukhutshwa kwe-Tribulus terrestris ngenxa yeziphumo zayo ezilungileyo kwi-testosterone kunye nomsebenzi wesondo, iphandiwe nezinye iindima ezibalulekileyo.
Olunye uphononongo lophando ngeziphumo ezilungileyo eziye zafunyanwa emva kokuba abafazi abanesifo seswekile 2 bafumene Tribulus terrestris extract. Abasetyhini abangama-98 abanesifo seswekile esingu-II abathathe inxaxheba kolu phando ngokuthatha i-1,000 mg ye-Tribulus ngosuku.
Emva kweenyanga ezintathu, abasetyhini abafumana umfuno abanamava banciphisa i-cholesterol kunye neqondo leswekile yegazi, ngokuthelekisa abo bafumana i-placebo. Uphando lwezilwanyana luye lwabonisa ukuba ukukhutshwa kweCortulus kungalinciphisa inani leswekile yegazi, ukunceda ukuthintela ukunyuka kwe-cholesterol yegazi kunye nokunceda ukukhusela ekonakaleni kwemithambo yegazi.
Ezinye izinto ezinokubakho zokusetyenziswa kweCortulus terrestris
Ukongeza kwi-Tribulus terrestris ukusebenzisa okucocekileyo sele kugqityiwe, imichiza inokuba nezinye iziphumo ezilungileyo emzimbeni: Ezi ziphumo zibandakanya:
umzimba:Ukungafikeleli kweempuku kuye kwaqinisekiswa ukuba kuphucuka xa benikwa ukukhutshwa kweCortulus.
Ibhalansi yethumbu:Lo mfuno unokusebenza njengento yokuhluza kunye nokunyusa ukuveliswa komchamo.
Ukuvuvukala:Uvavanyo oluncinci lwe-tube-tube lubonise ukuba kunokwenzeka ukuba ube nefuthe lokuthintela usulelo.
Ingqondo:Xa i-Tribulus terrestris ekhutshiweyo isetyenziswa njengenxalenye yezithako ezininzi kwisongezelelo, kwafunyaniswa ukuba ineziphumo ezichasene noxinzelelo kumagundane.
Cancer:Uphononongo lweTB-Test luye lwabonisa iziphumo ezinokubakho zokulwa nomhlaza kwesi siongezelelo
Ukukhululeka:Xa i-Tribulus isusi isetyenziswa kwiidosi eziphezulu, ibonelela ngesiqabu seentlungu.
3.I-Tribulus terrestris ikhupha umthamo
ezahlukeneyo I-Tribulus terrestris ikhupha umthamo isetyenzisiwe kwizifundo zophando kuvavanywa izibonelelo zempilo yemifuno. Umzekelo, uphononongo oluvavanya ukusebenza kwe-herb kwi-erectile dysfunction, Tribulus terrestris dosage dosage ye-250 mg ethathwe amaxesha ama-3 ngosuku kwiinyanga ezi-3 yasetyenziswa kwaye iziphumo ezincomekayo zaqatshelwa.
Abaphandi bavavanya amandla ayo okunciphisa iswekile yegazi esetyenziselwa i-1,000 mg yonke imihla, ngelixa isifundo siphanda ukuphuculwa kwe-libido kusetyenziswa i-250-1,500 mg mg ngeedosi zemihla ngemihla. Abanye abaphandi basebenzise iidosi malunga nobunzima bomthathi-nxaxheba. Umzekelo, abaphandi abaliqela basebenzise imithamo ye-4.5 ukuya kwi-9 mg ngepawundi okanye i-10 ukuya kwi-20 mg kilo nganye yobunzima bomzimba.
Ngale nto engqondweni, ukuba ubunzima obumalunga ne-70 kg (i-155 yeepawundi) kungafuneka uthathe umthamo we-700-1,400, XNUMX mg yonke imihla.
Ukuba i-Tribulus terrestris ehlanganisiweyo ayisetyenziswanga, iidosi zesiko zomgubo osisiseko ukusuka kwiingcambu kufuneka zikuluhlu phakathi kwe-5g ukuya kwi-6g kodwa iziqhamo kufuneka ziphakathi kwe-2g ukuya kwi-3g.
4.Izibonelelo ze Tribulus terrestris
I-Tribulus terrestris isetyenziselwe ixesha elide kwi-Ayurveda kunye nonyango lwesiTshayina kwendabuko ukuphucula ukusebenza kwezemidlalo. I-Tribulus terrestris ikwakholelwa nokonyusa amanqanaba akho ama-hormone athile afana ne-estrogen kunye ne-testosterone.
Kwakhona, i-tribulus terrestris kuthiwa inceda kwimiba eyahlukeneyo yezempilo kubandakanya amatye ezintso, i-cholesterol ephezulu, kunye nemisebenzi njenge-diuretic. Nazi ezinye ze Izibonelelo ze Tribulus terrestris Iinkcukacha:
Ukuphuculwa kokwenziwa kweNtshatsheli
Ukutya okongeziweyo okune-tribulus terrestris kuvame ukuthengiswa amandla abo okukhulisa amanqanaba amanqanaba e testosterone. Ngenxa yoko, yakha ubunzima bemisipha, yandisa amandla, kwaye yonyusa ukuqina kweprotein. Oku kunceda amandla omzimba kunye nonyamezelo lomzimba kwiimeko zomsebenzi onamandla kunye nengqondo.
Ukongeza, inamandla okunika amandla kunye nemvuselelo ngokukhawuleza. Ukukhutshwa kwe-Tribulus terrestris kukwanceda ukugcina imetabolism eqhelekileyo, ukunyusa ilahleko yamafutha, eyinxalenye ebalulekileyo yomlo ukuya ekulahlekelweni kwesisindo esongezelelekileyo. Le herb icingelwa ukuba inesimo se-anabolic. I-Tribulus terrestris ibandakanywa kwiinkqubo ezininzi zokwakha umzimba ngaphakathi kweefomula ezahlukeneyo zokubuyisela ubunzima bomzimba, ukomelela kwamandla, kunye nokukhula kwemisipha.
Esi songezo ke silungele kakhulu iimbaleki ngexesha lokulungiselela kunye nexesha lokusebenza kunye nexesha lokufumana kwakhona emva kokudinwa komzimba. Ke, i-Tribulus iluncedo kakhulu kwiimbaleki nakubantu abaqhuba ngokusebenza benesimo esihle kunye nempilo.
Kuhlalutyo lwezifundo zekliniki ezilishumi elinanye ezazishicilelwe, ababhali bale ngxelo bamisela ukuba inqanaba eliphezulu lomdlalo wokuphucula ukusebenza liye laqatshelwa xa kuthathwa ikopi xa izongezo zinento yokudibanisa.
Ukuxhasa imeko yezempilo ngokubanzi
Kumadoda, ukukhutshwa kwe-tribulus kwenza ukuba ukusebenza okuqhelekileyo kwesifo se-prostate kunye nezinye izifo ze-endocrine, kwaye kube nefuthe elihle kwimpilo yengqondo kunye nemvakalelo ngokwasemzimbeni.
Isicatshulwa kwakhona sigcina amanqanaba afanelekileyo e-cholesterol emzimbeni. Ukongeza, ukukhutshwa kwe-tribulus kugcina iindonga zesithambo segazi kwaye ziqine, ke oko kuyanceda ekuphuculeni impilo yomzimba.
Kwabafazi, i-tribulus isusa inceda utshintsho lwe-menopausal, njengoko iikhompawundi ezisebenzayo zixhasa ukuzinza kwehomoni yomzimba kunye nokunceda ukunciphisa iintlungu zokuya esikhathini. Isibonelelo se-Аnother esenza ukuba le ntsholongwane ithandwe kukuba i-furostanol saponins yenza ukuba utshintsho lwe-protodioscin lube yi-DHEA (dehydroepiandrosterone), edla ngokubandakanyeka kulungelelwaniso oluqhelekileyo lwe-steroids, ngokunceda ekutshintsheni kwehomoni zesini kwi-cholesterol yasimahla.
5. I-Tribulus terrestris ikhupha uncedo ekuphuculeni impilo yezesondo
Tribulus terrestris inokuncedisa ukukhulula ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile, ngokophando olwapapashwa eMaturitas ngonyaka ka-2017. Xa bephanda ngeziphumo zenyanga ezi-3 zokuxhuzula kwe-tribulus terrestris kumadoda ane-erectile dysfunction ephakathi okanye ethambileyo, izazinzulu zabona ukuba abo bafumene ukukhutshwa kwe-tribulus bafumana uphuculo olubalulekileyo. ekusebenzeni ngokwesondo.
Kwakhona, isifundo esenziwe ngo-2018 kwaye sapapashwa kwi-Gynecological Endocrinology sicebisa ukuba ukukhutshwa kwe-tribulus kunokunceda kunyango wokungasebenzi kakuhle ngokwesondo kwabafazi.
Ngexesha lophononongo, abafazi abangama-40 ababephulukene ne-libido yabo baphathwa nge-T. terrestris okanye nge-placebo. Ngexesha lokuphela kophando, abo bafumene i-tribulus terrestris extract babenenqanaba elandayo le-testosterone kwaye bafumana ukuphucuka okukhulu kwizinto ezifana nokuvuselela, umnqweno, kunye nolwaneliseko.
Iqela leenzululwazi ezahlukileyo lafumanisa ukuba xa amadoda anomnqweno wesini esisezantsi afumene i-750-1,500 79 mg ye-Tribulus ekhutshwa ngosuku kwiiveki ezisibhozo, ukuqhuba kwabo ngokwesondo kunyuke ngeipesenti ezingama-XNUMX.
Kwakhona, izazinzulu zifumanise ukuba iipesenti ezingama-67 abasetyhini abane-libidos ezinciphileyo banamava ophuculo lwesifiso emva kokuba befumene izongezelelo ze-Tribulus eziphakathi kwe-500 kuye kwi-1,500 mg kwiinyanga ezi-3.
Olunye uvavanyo lweklinikhi lubike ukuba izongezo eziqukethe i-tribulus herb ziphuculwe, umnqweno wesondo, kunye nolwaneliseko ngokwesondo kwabasetyhini abahlangabezana ne-libido ephantsi. Olunye uphononongo lubonisa ukuba ukuthatha i-800 mg yale herb yonke imihla kusenokungaphilisi ngokufanelekileyo ukungasebenzi kwe-erectile.
Nangona kunjalo, izifundo zabonisa ukongezwa okukhulu kulwaneliseko ngokwesondo kunye ne-erections ngethamo ye-1,500 mg imihla ngemihla.
6. Ukukhutshwa kwe-Tribulus terrestris kunokunceda ukunciphisa umzimba
Nangona i-Tribulus terrestris ekhupha i-IS ayisiyi-herb yokulahleka kwesisindo, inokuba negalelo ekunciphiseni ubunzima. Oku kubaluleke kakhulu kwabo banciphise amanqanaba e-testosterone kwaye batyeba ngaxeshanye.
Amanqanaba asezantsi e-testosterone adityaniswa namanqanaba amandla aphantsi, amandla omzimba asezantsi kunye nobunzima kunye nokunyuka kwesisindo. Kwakhona, uphando lubonakalise ukuba abantu abatyebileyo okanye abatyebe kakhulu banokuthi batyebe amanqanaba e testosterone.
Ukuba nale nto engqondweni, iipropathi ezikhulisa umzimba ze-testosterone kaT. Terrestris inokubangela ukunciphisa umzimba. Ngapha koko, xa usebenzisa i-Tribulus terrestris ekhupha umgubo, ungabona ukunyusa kumanqanaba amandla akho. Ungawasebenzisa la mandla ukwenza umthambo obanzi, ngokwenza njalo ukomeleza imizamo yakho yokunciphisa umzimba.
7. I-Tribulus terrestris i-powder ekhutshiwe iyathengiswa
I-Tribulus terrestris ekhutshwayo iyathengiswa Iyathengiswa kwi-Intanethi kodwa ngeenqanaba ezahlukeneyo zokucoceka. Kuya kufuneka ke ujonge Tribulus terrestris susa umthengisi onikezela ngobunyulu obuphezulu obunokwenzeka kunye nepesenti ephezulu yomxholo we-saponins. I-Tribulus terrestris yethu yokukhupha umgubo wentengiso yenye yezona zishenxisiweyo ezisulungekileyo onokuze uzifumane ngobunyulu obuqinisekisiweyo bama-99%. I-Tribulus terrestris yethu ekhupha umgubo iqulethe malunga neepesenti ezingama-99 zezithako ezisebenzayo ezaziwa ngokuba ziiaponins. Oku kuthetha ukuba i-scoop enye ye-500mg ye-Tribulus terrestris yethu ekhupha umgubo iqulethe i-495mg ye-saponins.
Ukuba ufuna ukuthenga i-Tribulus terrestris ekhuphe umgubo kuphando lwakho okanye ukusebenzisa, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
8. Ungayithenga phi i-Tribulus terrestris yokukhupha umgubo ngobuninzi?
Ukuba ukhangele Thenga i-Tribulus terrestris umgubo ngobuninzi, kuya kufuneka ukhangele umthengisi onamava we-Tribulus terrestris. Nangona kukho abathengisi abaliqela ngaphandle phaya, kuya kufuneka wazi ukuba ayingabo bonke abathengisi abanolwazi kunye nezixhobo eziphezulu ezinokubenza balungiselele eyona icocekileyo ye-Tribulus terrestris. Ezinye iimveliso zinezixa ezincinci kakhulu zesaponins. Okubi ngakumbi, abanye abaxhasi be-Tribulus terrestris, musa ukuveza ubungakanani bezithako ezisebenzayo luphawu olubi.
Kwi-buyaas.com, siyi-Tribulus terrestris ekhutshelwa umthengisi okhupha umgangatho ophezulu wekhowudi yokuthenga. Umgubo wethu uthengiswa kwi-airtight kunye neepakeji eziphezulu zokutywina ukuze uqiniseke ukuba zihlala zintsha. Ke, nokuba ujonge inani elincinci lokusebenzisa kwakho okanye ujonge kulo Thenga i-Tribulus terrestris susa umgubo ngobuninzi bophando okanye ngeemfuno zokwenza iziyobisi, sifumene umva wakho.
I-Pokrywka, Andrzej; I-Obmiński, iZbigniew; Malczewska-Lenczowska, Jadwiga; I-Fijatek, iZbigniew; Turek-Lepa, Ewa; IGrucza, iRyszard (2014-07-08). "Iinxalenye zezongezo kunye neCortulus terrestris esetyenziswe ziimbaleki". Ijenali yeKinetics yoLuntu. 41 (1): 99-105
Brown GA, Vukovich MD, Reifenrath TA, Uhl NL, Parsons KA, Sharp RL, King DS (2000). "Iziphumo zokufika kwe-anabolic ekugxileni kwe-serum testosterone kunye nokutshintshwa koqeqesho lokumelana kubafana". Ijenali yaMazwe ngaMazwe yeSondlo seMidlalo kunye nokuzivocavoca umzimba. 10 (3): 340-59
Neychev VK, Mitev VI (2005). "I-aphrodisiac herb Tribulus terrestris ayichaphazeli imveliso ye-androgen emadodeni". Ijenali ye-Ethnopharmacology. 101 (1–3): 319–23.
UGauthaman K, Ganesan AP, Prasad RN (2003). "Iziphumo zesondo ze-puncturevine (Tribulus terrestris) ekhutshwa (protodioscin): Uvavanyo kusetyenziswa imodeli yerat". Ijenali yoNyango olunye kunye noNyango oluGqibeleleyo. 9 (2): 257-65.